Xildhibanaad Awstareeliyaaan ah oo ku jees jeestay indho shareerka muslimiinta | Somaliska
Xildhibanaad Awstareeliyaaan ah oo ku jees jeestay indho shareerka muslimiinta
Dalka Awstareeliya ayaa haweeney madax u ah xisbi siyaasadiisa fogtahay ee la yiraahdo One Nation, waxeey si xishood darro ah u soo xiratay indho shareerka dumrka Muslimiinta xirtaan, iyadoo haweeneydani ay ihaaneeyneeysay dharkaa iyo dadyowga ay u gaarka yihiin.
Haweeneydan oo lugu magacaabo Pauline Hanson, ayaa gudaha u soo gashay kalfadhiga baarlamaanka. Waxaana ay abuurtay jawi guux oo laga dareemayey gollaha uu shirka ka furmayey. Haweeneydan ayaa sidoo kale waxeey xildhibaanada ka codsatay in dalkaasi laga mamnuuco xijaabka.
Xeer ilaaliyaha guud ee dalkaasi George Brandis, ayaa canbareeyay falka ay ku kacday haweeneydan wareersan. Waxa u sheegay isagoo la hadlaya in falka ay sameeysay ahaa mid ku xad-gudub ku ah dad iyo diin gaar ah.
Hadalka xeer ilaaliyaha oo aad u soo jiitay dareenka asxaabta mucaaradka ah ee meesha fadhisay ayaa aad ugu riqaaya iyagoo sacab hadalkiisa ku taageeray. Xubnaha mucaaradka ayaa si aad ah ugu sacbiyay Mr Brandis markii uu hadalkasi jeediyay.
“In aad bulsho yasto oo aad faquuqdo iyo inaad ku jees jeesto dhar astaan tiimeed ah, waa fal aad u xun waxaan kaa codsanayaa inaad dib ueeggto waxa aad sameeysay” ayuu yiri George Brandis oo ah xeer ilaaliyaha guud ee dalkaas oo ka qeyb galayey kalfadhiga baarlamaanka, islamarkaasina dhaleeceyndusha uga tuuray haweeneydaasi ku dheer naceybka muslimiinta, misna hadalkiisa ku daray in falka ay ku dhaqaaqdayn mid halis ah oo farta ku fiiqaya muslimiinta dalkaasi ee shanta boqol ee kun gaaraya.
Xisbiga haweeneydani hogaamiso ayaa tododbaadkii hore waxaa uu soo gudbiyey mooshin uu ku doonayo in la mamnuuco xijaabka, balse aan wax go’aan ah laga gaarin iyadoo xisbiyada ay ka doodayaan. Hawweneydan oo tan iyo markii la doortay sanadkii 1996-dii, ayaa aheyd mid hadaladeeda ay dhaliyaan muran iyadoo aan si ka fiirsasho laheyna u cambaareeysa muslimiinta dalkaasi. Sanadkii hore ayey aheyd markii ay sheegtay in muslimiinta dalkaasi ay yihiin kuwo la wareegtay.
Dhibaatooyinka masaajida lagu hayo oo baaritaan lagu samayn rabo
Gabdho dhar la’aan ah oo galay masaajidka Stockholm